Muxuu kusoo dhamaaday kulankii u dhexeeyay Kooxaha Dekedda iyo Heegan - Jazeera FM
March 12, 2018 admin featured
Kooxaha Kubada Cagta Dekedda iyo Heegan ayaa ku kala baxay bar baro goola.an ah 0-0, Ciyaar ka dhacday garoonka Koonis Stadium degmada C/casiis ee Gobolka Banaadir, taasoo qayb ka ahayd horyaalka Soomaalia Premier League.
Kulanka oo ahaa mid aad u xiiso badan ayaa laba Koox ay soo bandhigeen Ciyaar ay wayn u jeclaysteen dad waynihii kasoo qayb galay, marka loo fiiriyo fursadaha laba Koox ay heleen intii ay socotay qaybtii hore ee dheesha.
Kooxda Dekedda ayaa kulankan ku waysay Cayaariyahan C/laahi Cali Bile, halka Kooxda Booliska ee Heegan iyadana uu ka dhaawacmay Cayaariyahan Mahad Cali Beeray, ku waas oo garoonka laga saaray intii ay socotay kulankan.
Si kastaba ha ahaatee” kulankii galabta ee u dhexeeyay labada Koox ee Heegan iyo Dekedda waxaa garsoore ka ahaa Xasan Maxamed Xaaji, halka Calanhayaha Kowaad uu ahaa Mahad Maxamed Gentelman, Calanwadaha labaadna wuxuu ahaa Xasan Xuseen Mocow, halka sarkaalka afaraad ee kulankanna wuxuu ahaa C/Risaaq Aways Maxamuud, wuxuuna kusoo dhamaaday barbaro 0-0.
The post Muxuu kusoo dhamaaday kulankii u dhexeeyay Kooxaha Dekedda iyo Heegan appeared first on Wararka Ciyaaraha.
← Giuseppe Marotta Oo ka Hadlay Xaalada Xidiga Khadka Dhexe ee
Paul Merson oo sheegay macalinka badalka unoqon doono macalin Wenger →